FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BICHPOO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bichpoo
Alika mifangaro Bichon Fris / Poodle mifangaro
Bug ny Bich-Poo mainty tamin'ny 16 volana— 'Mahafatifaty sy sariaka tokoa i Bug. Faly izy manana manodidina. Izy dia antsasaky ny Poodle sy Half Bichon Frize. '
Ny alika Bich-poo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bichon frize ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Poochon
Designer Dogs Kennel Club = Poochon
Mpanoratra International Canine Registry®= Poochon (Bichpoo)
Drafitra mpamorona endrika = Poochon
Mpikatroka bich-poos, Zoey sy Bonnie toy ny alika kely amin'ny 9 herinandro
Zoey ilay Bich-poo mainty amin'ny 6 volana— 'Zoey dia fangaro Bichon / Poodle. Ny reniny dia Bichon Frize voasoratra anarana ary ny rainy dia kilalao Poodle voasoratra anarana. Haingana manokana i Zoey ary mianatra baiko haingana be. Hendry be izy ary tia manao ny hafetseny. Manana toetra mahafinaritra sy mahafinaritra izy ary tia ny fianakaviany. Fony izahay vao nahalala azy tamin'ny 8 herinandro dia nanana palitao mainty matevina misy pentina fotsy sy pentina fotsy kely amin'ny hohony. Izy izao dia manana palitao mainty volontany misy volo fotsy misy volo fotsy misitaka manerana. Liana aho mahita raha mbola miova arakaraka ny taonany ny volony palitao. Tato ho ato dia nanjary nazava tamiko fa nihevitra i Zoey fa amboniko teo ambonin'ny filaharany entana izy. Nanaja ny vadiko ho toy ny alfa izy. Na izany aza, rehefa izaho nandao ny trano izy dia hidradradradra sy hivoaka amin'ny fomba avo lenta, saika taitaitra. Nokarakarainy koa ny kiraroko, nalainy ny ondana ary nangalariny ny akanjoko. Ary farany, nanomboka nanao fikarohana aho ary nanapa-kevitra fa tsy izaho ilay izy mpitarika fonosana . Rehefa nanao fanovana kely vitsivitsy aho dia nanomboka niova ny fihetsiny. Tsy midradradradra intsony izy rehefa miala aho. Alohan'ny hanokafako ny varavarana dia asaivo hipetraka izy ary miandry mandra-pidirako voalohany ary avelako hiditra manaraka ahy izy rehefa miteny aho hoe 'Tsara.' Tsy avela hatory amin'ny ondana koa izy. Rehefa entiko mandeha an-tongotra izy dia ataoko mandeha eo akaikiko izy ary izy tsy mahazo misintona ny firaka . Ny fitondrana Zoey tamin'ny dia an-tongotra sy ny fanovana ny fanovana hafa dia nanatsara ny fifandraisanay ary nanampy azy ho lasa alika sambatra kokoa. Ny fomba nitondran'i Cesar ho mpitarika entana dia nanampy ahy mivady hanana trano milamina kokoa. Fiovana iray hafa nataonay ny nananganantsika Cocker Spaniel 1 taona vao tsy ela akory izay. Tonga mpinamana haingana i Zoey sy i Max ary nandany ny herin'izy ireo izy ireo fa tsy naka ny anay rehetra. Tsapanay fa manana tokantrano sambatra izahay. Manaraka amin'ny lisitry ny fiofanana dia ny mampianatra an'i Max ny kitapom-batsy. Amin'ny maha-40-lb. Cocker Spaniel, miasa amin'ny fampiofanana azy indray izahay mba tsy mitsambikina amin'ny olona ary tsy hisintona ny firaka. Tena hitako fa navelantsika handeha tamin'ny zavatra taloha i Zoey izay tsy namela alika lehibe kokoa hanao. Raha tsy teo ity tranonkala ity dia tsy ho nahalala momba izany aho aretin'alika kely ary maninona Zoey nandrava ny fananako ary raiki-tahotra rehefa lasa aho. '
'Fampahafantarana an'i Sam sy Riley, F1 hybrid Poochon na i Bich-Poo na i Bichon Poodle mirahalahy avy tamin'ny fako teraka tamin'ny volana Janoary 2006. Sam sy Riley nipetraka teo amin'ny seza tamin'ny faha-18 taonany, nihaona tamin'ny alahady kamo — Sam (ankavia) ary Riley (ankavanana) nankafy ny tolakandron'izy ireo tamin'ny alahady hariva teo amin'ny lavarangana fidirana. Araka ny hitanao dia nankafy ny fitsakoana ny seza ihany koa izy ireo nandritra izay volana maro lasa izay. ' Sary natolotry ny Puppies Rolling Meadows
'Ity sary ity dia an'i Sam sy Riley tamin'ny faha-5 taonany nitaingina kalesy fiantsenana. Nosintomin'izy ireo ny fanoharana marobe rehefa manohy ny diany sy ny tantaran'i Sam sy Riley izahay. Samy marani-tsaina izy roa ary izay tsy eritreretin'ny iray dia ny iray no mieritreritra. Samy manana ny toetrany samy hafa tanteraka izy ireo saingy mifankatia ary afaka miaraka foana izy roa. Riley sy Sam dia feno herintaona amin'ny talata ho avy izao. Rahoviana ianao no tokony hamaky izany amin'i Sam fa tsy hitombo ho olombelona izy ?? Nahazo ny fijery i Sam ary i Riley no nahazo ny ati-doha. Samy marani-tsaina izy roa ireo, ary samy manana ny endriny avy izy ireo. Ny hevitra tsara tadidio dia ny mamela ny hidin-trano fiarovana amin'ny vata fampangatsiahana satria mahay mamoaka rano sy ranomandry avy amin'ny vata fampangatsiahana i Sam. Fantatr'i Sam ny fomba hanokafana ny varavaran'ny tafiotra eo alohan'izay ka mila manidy ny varavaran'ny tafio-drivotra foana isika hamela ny varavarana fidirana hisokatra. Sam koa dia namantatra ny fomba hanokafana ny vavahady fiarovana eo an-tampon'ny tohatra ka dia nidina fotsiny izahay. Teo anelanelan'izy roalahy dia nahita zavatra hidirana i Riley ary i Sam kosa nahita ny lalana hankanesana any amin'izy ireo. Raha tsy nieritreritra an'izany i Riley dia ho kamo loatra i Sam mba hikorontana. ' Sary natolotry ny Puppies Rolling Meadows
Sam sy Riley the Bichon / Poodle alika kely amin'ny 8 herinandro, sary natolotry ny Rolling Meadows Puppies
Ity i Max (ankavanana) sy ny reniny. 3 taona i Max ary mifangaro amin'ny Bichon Frisé sy Poodle.
Andriamatoa Baxter ilay Bichon-poo mainty tamin'ny faha-8 volana— 'Tia mandihy amin'ny tongony aoriana izy ary hanofahofa tanana anao miaraka amin'ny paokony 2 eo alohany raha tiany hovelominao izy. Amin'ny ankapobeny dia alika mahafinaritra izy ary faly aho fa nahazo azy. '
Lucy the Bich-poo amin'ny 8 volana (Bichon / kilalao Poodle mix dog)
Pete the Bichon / Poodle hybrid (Bich-poo, antsoina koa hoe Poochon araka ny ACHC) 10 taona— 'Izaho sy ny vadiko dia nahita ny hakanton'ilay karazan-kazo mifangaro miaraka amina zanakalahy asthmatic ary izaho koa misy olana ara-batana. Manana Bichon / Poosie 10 taona antsoina hoe Pete isika. MAHAFINARITRA izy - tsy hoe manam-pahaizana be, fa mora ampiofana koa. Izy dia fitiavana, fitiavana, FITIAVANA — ary rehefa tsy afa-mivezivezy aho (nanana mpisolo toerana miisa 3 aho) dia nilamina sy nilamina ihany koa izy. Alika be fitiavana sy malefaka be izy. Milanja 25 pounds eo ho eo izy ary tsy mandatsaka tanteraka. Ny zavatra nianarany rehetra dia tsy nahitam-bokatra trondro volamena 5 fotsiny. Zara raha mivovo izy - hodi-kazo telo hampahafantatra anay fa misy olona eto dia sahaza ho azy. Tiany ny olona. Mampaneno lakolosy fitondra mihantona eo amin'ny tataom-baravarana izy mba hampahafantarantsika antsika rehefa mila mivoaka izy. Milamina izy nefa milalao am-pifaliana rehefa taitra ny toe-tsaina. Alika mpankato be, ny fahaizany mifampiresaka dia mbola mampitolagaga antsika ihany. Izany rehetra izany ary mahafatifaty toy ny dickens hanombohana !!! '
Standard Bich-poo: lakroa eo anelanelan'ny Bichon frize SY Poodle mahazatra —Izany karazana izany dia tsy azo atao raha tsy amin'ny fanabeazana aizana namboarina. Tsy hafa noho ny Bich-poo mahazatra anao izany, afa-tsy ny lehibe kokoa.
Alika kely Bich-poo
Casper the Bichon Poo amin'ny herinandro 8½
Andriamatoa Lee amin'ny maha alika kely 8 herinandro azy
Bug ny Bich-Poo miloko mainty amin'ny 16 volana
boxer volamena retriever mifangaro alika kely amidy
4 volana mavo laboratoara
beagle sheltie mifangaro alika kely amidy
rat terrier sy jack russell mifangaro
alika an-tendrombohitra swiss mifangaro alika kely
tapany mini pincher antsasaky chihuahua
pitbull mainty sy fotsy